NguYeremiya 27 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
1 Ekuqalekeni kobukumkani bukaZedekiya unyanaunyana kaYosiya, ukumkani wakwaYuda, kwafika eli lizwi kuYeremiya, liphuma kuYehova, lisithi:
4 ubawisele umthethoumthetho wokuba bathi ezinkosini zabo, UtshoUtsho uYehova wemikhosi, uThixouThixo kaSirayeli, ukuthi, Yitshoni ezinkosini zenu ukuthi,
7 Ziya kumkhonza zonke iintlangaiintlanga, yena, nonyana wakhe, nonyana wonyana wakhe, kude kufike ixeshaixesha lelakhe ilizweilizwe; zimkhonze ke naye iintlangaiintlanga ezininziezininzi nookumkani abakhulu.
8 Kuya kuthi, uhlanga nobukumkani obungayi kumhonza uNebhukadenetsareuNebhukadenetsare ukumkani waseBhabheli, obungayifakiyo intamointamo yabo edyokhweni yokumkani waseBhabheli, ndiluvelele olo luhlanga ngekrele, nangendlala, nangendyikitya yokufa, utshoutsho uYehova, ndide ndibagqibe ngesandla sakhe.
9 Musani ke nina ukubaphulaphula abaprofetiabaprofeti benu, nabavumisi benu, namaphupha enu, namatola enu, nabakhafuli benu; bona abo bathi kuni, Aniyi kumkhonza ukumkani waseBhabheli.
11 Ke lona uhlanga oluya kuyingenisa intamointamo yalo edyokhweni yokumkani waseBhabheli, lumkhonze, ndoluyeka emhlabeni walo, luwusebenze, luhlale kuwo; utshoutsho uYehova.
14 Musani ukuwaphulaphula amazwi abaprofetiabaprofeti abathetha kuni, besithi, Aniyi kumkhonza ukumkani waseBhabheli; ngokuba baniprofetela ubuxoki.
15 Ngokuba andibathumanga, utshoutsho uYehova; bona baprofeta ubuxoki egameni lam, ukuze ndinigxothe, nitshabalale, ninanabaprofeti abo baniprofetelayo.
16 Ndathetha kubabingeleli nakwaba bantu bonke, ndisithi, Utshilo uYehova ukuthi, Musani ukuwaphulaphula amazwi abaprofetiabaprofeti benu abaniprofetelayo, besithi, YabonaYabona, impahla yendlu kaYehova iya kubehle ibuyiswe eBhabheli; ngokuba baniprofetela ubuxoki.
19 Ngokuba utshoutsho uYehova wemikhosi, ngokusingisele kuzo iintsikaiintsika, nangalo ulwandleulwandle, nangazo iinqwelwana, nangawo amasalela empahla eseleyo kulo mzi,
20 engathatyathwanga nguNebhukadenetsare ukumkani waseBhabheli, ekumfuduseni kwakhe uYekoniya, unyanaunyana kaYehoyakim, ukumkani wakwaYuda, eYerusalem, ukumsa eBhabheli, enabanumzana bonke bakwaYuda neYerusalem;
21 ewe, utshoutsho uYehova wemikhosi, uThixouThixo wamaSirayeli, ngempahla eseleyo endlwini kaYehova, nasendlwini yokumkani wakwaYuda, naseYerusalem, ukuthi,
22 Iya kusiwa eBhabheli ibe khona, ide ibe yimini yokuyivelela kwam, utshoutsho uYehova; ndiyinyuse, ndiyibuyisele kule ndawo.
IDuteronomi 13:2, 18:10
1 Kumkani 7:15, 23, 27, 8:42, 22:11
2 yeziKronike 36:18, 23
UEzra 1:2, 7, 11, 7:19
UIsaya 8:19, 45:12
NguYeremiya 13:1, 14:14, 16, 20:5, 21:9, 24:1, 25:9, 11, 12, 14, 20, 21, 28, 28:1, 3, 10, 12, 14, 29:8, 10, 32:1, 17, 38:22, 40:9, 43:10, 50:18, 27, 52:17
IZililo 1:10, 2:14
UHezekile 12:3, 30:24
UDaniel 2:38, 4:14, 22
UMateyu 1:11, 7:22
KwabaseRoma 13:1, 2